जागौँ पोखरा अभियानका अभियान्ताहरुको एक घन्टे ध-र्ना पोखरामा जारी - Googlepokhara
जागौँ पोखरा अभियानका अभियान्ताहरुको एक घन्टे ध-र्ना पोखरामा जारी
googlepokhara	प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र २४, २०७७ समय: २१:५३:५५
पोखराका स्वतन्त्र युवाहरुको समूह ‘जागौं पोखार अभियान’ले पोखरा महानगरपालिकाभित्रका अ-निय-मितता विरुद्ध द-बा-बमूलक कार्यक्रम गरेको छ । बुधवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रिय कार्यलय, पोखरा नयाँबजार अगाडि द-बा-ब स्वरु–प एक घण्टा वि-रो-ध प्रदर्शन गरेका हुन् । ‘जागौं पोखरा अभियान’ का अभियन्ताहरुले एक महिना अगाडि ‘१३ करोड खै मेयरसाव’ लेखिएको प्लेकार्ड लिएर महानगरमा प्र-द-र्श-न गरेका थिए । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानहादुर जिसीले १३ करोड नभई १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै तलमाथि भएको दा-बी गर्दै बास्तबिक हिसाब किताब सार्बजनिक गर्न २५ दिनको समय मा-ग गर्नुभएको थियो । तर उहाँले भने जस्तो ११ करोड रुपैयाँ पनि राजश्व खातामा जम्मा नभएको अभियन्ता दीपक आचार्य दा-बि गर्नुभएको छ । ‘२ वर्षअघिको लेखापरीक्षण गरिएको हो । चेक छ भनिएको रकम अहिलेसम्म खातामा जम्मा भएको छैन,’ भन्दै अभियन्ताहरु १३ करोड नै हि-ना-मि-ना भएको आफ्नो दा-बीमा अडिग छन् ।
महानगरले अनियमितताबारे स्पष्टिकरण दिएर दोषीमाथी कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । ‘महानगरको भ्रष्टाचार, अनि-यमि-तताप्रति प्रश्न सोध्ने अधिकार हामीलाई छ, यति ठूला अनि-यमि-तताका घ-ट-ना सार्वजनिक हुँदा पनि किन चुप छ महानगर ?, भन्दै कार्यक्रम संयोजक शिरीष गुरुङले प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले नागरिकले तिरेको करमाथि म-न-परी गर्ने अ-धि-का-र कसैलाई नभएको र एकएक हिसाब दिनुपर्ने बताउनुभयो । महानगरभित्र भएका अनि-यमि-तताबारे छा-न-बिन गर्न र दो-षीलाई का-रबा-हीको दायरामा ल्याउनका साथै कर्मचारीले अनि-यमि-तता गरेको प्रष्ट देखिए पनि राजनीतिक संरक्षण दिने गरिएको आ-रोप अभियानले लगाएको छ । अभियानका अभियन्ता सबिता शर्माले जनताको करको हरहिसाब चुस्त राख्नु महानगरको दायित्व हुने भन्दै ध-र्नामा सहभागि भएको बताउनुभयो । ‘नभएको पैसा खोजेको छैन, राजश्वकै रकम दायाँबायाँ भएपछि त बोल्नुपर्छ,’ उनले भनिन, ‘हामीले २५ दिनको समय दिएर हिसाब मागेका हौ ।’ समय सकिदा पनि महानगरले हिसाब नदिएको हुँदा आफुहरु छब्बिसौ दिन ध-र्नामा सहभागि भएको शर्माको भनाई थियो । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मान बहादुर जिसीले लेखा विज्ञहरुद्वारा छानबिन अघि बढाइसकेको बताउनुभयोे ।
‘१३ करोड नै तलमाथि परेको होइन, धेरै राजश्व जम्मा भैसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पौने २ करोडको हिसाब मिलेको छैन । त्यो पनि खोजी भैरहेको छ । केही दिनभित्रै सत्यतथ्य पत्ता लाग्नेछ ।’ साथै उहाँले अनुसन्धानक्रममा कोही दो-षी देखिए का-र्बा-हीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । पोखरा महानगरको राजश्व शाखा विभिन्न समय वि-वा-दित बन्दै आएको छ । तर मेयर को उक्त भनाइ प्रति अ-बिश्वास गर्दै समय सिमा सकिदा समेत हिसाब मिलाउन र कर्मचारी बचाउनलाई अरु समय दिन नसकिने अभियन्ता शिबराज बस्ताकोटिले बताउनुभयो । महानगरका भ्र-स्ट कर्मचारिलाइ का-र-बाहि हुनुपर्ने मुख्य माग सहित आज अख्तियार पोखराका कार्यलय प्रमुख बिपिन आचार्यलाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको बिस्व हिन्दु महासंघ नेपाल का केन्द्रिय उपाध्यक्ष जागौ पोखराका शंकर खरालले बताउनुभयो । सोही अवसरमा बोल्दै 13 करोड को हिसाब नपाए मा अब जस्तो सुकै अबस्था सिर्जना गर्न आफुहरु पछि नपर्ने अभियन्ता गोमा पराजुलिले बताउनुभएको छ । बिगत तिन दिन देखि महानगरमा ध-र्ना दिदै आएको जागौ पोखराले हिजो मंगलबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई ध्यानाकर्षण पत्र थियो । साथै महानगर मा बुझाएको ध्यानाकर्षणको प्रतिलिपि महानगर अगाडि तिन दिनसम्म प्रदर्शन गरिएको थियो ।
13 करोड को हिसाब सार्बजनिक गर, १० बर्षदेखि रहेका महानगरका कर्मचारिको सम्पति छा-न-बिन गरी सार्बजनिक गर, कर्मचारि सेवा ऐन २०७६ स्थगित गर भनि तिन बुदे मा-ग सहितको ब्यानर र सो कार्यक्रम मा संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रदान गरि महानगरको ध-र्ना स्थगित गरेर आजबाट अख्तियार कार्यलय पोखरामा एक घन्टा ध-र्ना कार्यक्रम सहित जागौ अभियानले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सो ध-र्ना कार्यक्रममा मौन रहि महानगरमा भ्र-स्टा-चार छ अख्तियार खोइ कँहा छ ? भन्ने ना-रा सहित को बिभिन्न ना-रा सहित को प्ले कार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले २०७५-०७६ मा पोखरा महानगरपालिकाको १३ करोड रुपैयाँ तलमाथि भएको रिपोर्ट निकालेको छ । राजश्व शाखाको तथ्यांक र बैंकमा जम्मा भएको रकमबीच १३ करोडको फरक छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट त्यस वर्ष १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सञ्चित खातामा जम्मा भएको छ । तर राजश्व शाखाको तथ्यांकले १ अर्ब ३९ करोड राजश्व उठेको देखाउँछ । त्यसो भए बाँकी १३ करोड खै त ? मलेपको प्रतिवेदन आएपछि पोखराका युवाहरुले तलमाथि भएको १३ करोडको हिसाब खोजेका छन् । अभियन्ता का अनुसार शंकर खराल, मदन भन्डारि, सिरोज बिजय कोइराला, दामोदर त्रीपाठि समेतको समुहले पोखराका स्वतन्त्र र बौद्दिक ब्यक्तिलाई यो अभियानमा जोडिन प्रेरित गर्ने जिम्मा पाएको छ ।